I-WordPress yamashishini amancinci | Martech Zone
Ngelixa kukho itoni yabantu kushishino elityhala iWindowsPress, kunokuba nzima kwishishini elincinci ngaphandle kwe-tech savvy yokwenza imeko yabo ye-WordPress. Le infographic enkulu ehamba umntu okanye iqela ngokusebenzisa into ekufuneka beyiqonde kunye nokuseta xa becwangcisa kunye nokwenza indawo yabo yeWordPress. Ndiyayithanda le infographic kuba ifuna ukuba umsebenzisi acofe ukuya kwi imicrosite yokusebenzisana ukubona impendulo.
Ngokoluvo lwam, inye kuphela ingcebiso engekhoyo kwizindululo- kwaye oko kuya kuhamba ne Inkulumbuso ye-WordPress yokubamba inkonzo njengeFlywheel. Ngokuhamba nomninimzi omkhulu, ishishini elincinci linokungqongqoza malunga nesiqingatha sale micimbi kuluhlu lwabo lokutshekisha, kubandakanya i-backups, ukhuseleko, ukugcinwa, ukusebenza kunye nenkxaso!
tags: indlela yokubhala ngegamaukuseta i-wordpressI-wordpress indlela yokwenza
Sep 9, 2012 ngo-7:12 PM
OMG! Thanda inkcazo ethi "Ngoluvo lwam" ngaphezu kwakho konke! Ngubani onengqondo ephilileyo onokuthi acinge ngale nto xa ngoku sinezisombululo ezinkulu nezingabizi kakhulu ze-SaaS? Apha eTyner Pond Farm (ishishini elincinci ngokucacileyo.) Sisebenzisa zombini iCompendium kunye neHubspot. Ilula, iyalinganiseka kwaye ayibizi. Akukho ndawo kule infographic apho ndibona nantoni na malunga nohlalutyo okanye ukulinganisa i-ROI.
Sep 9, 2012 ngo-9:38 PM
Abantu ngokuqinisekileyo bazijongela phantsi izixhobo ezifunekayo ukwakha ukuphunyezwa kobuchule kweWordPress. Bacinga ukuba "isimahla" kwaye emva koko bafumanisa yonke imiba ngokucokisekileyo ngokwenza, iiplagi, ulwakhiwo, ii-backups kunye nokhuseleko. Siyayithanda iWordPress kodwa sinomphuhlisi weWordPress osisigxina kunye nomyili kubasebenzi… hayi amashishini amaninzi anezo zixhobo!
Ngomhla wama-13 ku-Disemba 2012 ngo-2: 33 AM
Enkosi ngokundifundisa indlela yokuqhuba ishishini elincinci. I-WordPress ithembekile ngokwenene kwaye inokuqonda i-infographic. Yinto eya kuxhamlisa ishishini elininzi, kuba inokusebenza njengento eyongezelelweyo kubantu bakho.